स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव- यौ’न स’म्पर्क गर्दा मा’स्क लगाउनू – Jagaran Nepal
स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव- यौ’न स’म्पर्क गर्दा मा’स्क लगाउनू
न्युयोर्क : अमेरिकाको न्युयोर्कमा कोरोना महामारीको अवधिमा यौ-न स’म्पर्क गर्दा मास्क लगाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो ‘गाइडलाइन’ अपडेट गरेको छ ।न्युयोर्कका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले यसअघि सबैलाई से-क्स पा’र्टनरसँग सुरक्षित रहने बताएका थिए । पछिल्लो समय गाइडलाइन अपडेट गर्दै टाढा रहेका जोडीहरुलाई लामो समयपछि भेट्ने क्रममा मास्क लगाएर मात्रै यौ-न स’म्पर्क गर्न सुझाव दिएका हुन् ।गत महिना इंग्ल्याण्डमा रात का’ट्ने गरी बाहिर जानु र अरुसँग यौ’न सम्प’र्क गर्न नपाइने भन्दै कानून
यौ-न सम्प’र्कको अवधिमा कोरो’ना भा’इरस सर्नसक्ने भन्दै सचेत गराउन यस्तो सुझाव दिइएको बताइन्छ । ‘अनुहार छोप्ने मास्क लगाउनू, यौ न स’म्पर्कको अवधिमा नाक, मुख छोप्नु वा मास्क लगाउनु उचित हुन्छ । यद्यपि यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो,’ गाइडलाइनमा उल्लेख छ ।यौ न स’म्पर्कको अवधिमा लामो स्वास फेर्दा वा अंकमाल गर्दा को’रोना भा’इरस सर्नसक्ने भन्दै न्युयोर्कका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गाइडलाइन मार्फत सुझाव दिएका हुन् । यस्तै महामा’रीका बेला यौ न स’म्पर्कको बेला यौ’न सम्प’र्कमा पनि सिर्जनात्मक हुन गाइडलाइनले सुझाव दिएको छ ।
गत महिना इंग्ल्याण्डमा रात का’ट्ने गरी बाहिर जानु र अरुसँग यौ’न सम्प’र्क गर्न नपाइने भन्दै कानून नै लागु गरेको थियो । यसअघि अमेरिकाकाे न्युयाेर्क टाइम्सकाे एक रिपाेर्ट अनुसार याै’न सम्प’र्ककाे क्रममा काेराे’ना भा’इरस सर्दैन । तर चुम्बन गर्दा सर्नसक्ने तथ्य पुष्टि भएकाे छ । एजेन्सी / अन्नपुर्णमहिलाले ‘ब्रा’ प्रयोगबारे विभिन्न ‘भ्रम र यथार्थ’ !
तर यो जरुरी छैन । यो महिलामा भर पर्छ कि उनीहरु आफ्ना स्त-न कसरी देखाउन चाहन्छन् । यदि तपाइँ स्त-न ठूलो देखाउन चाहनु हुन्छ भने फम सहितको ब्रा लगाएपनि हुन्छ तर केही फरक पर्दैन भने ब्रा लगाउनु जरुरी छैन ।महिलाहरुमा प्याडेड वा पुश अप ब्रा लगाउँदा स्त-न ठूलो हुने ठान्छन् । तर बास्तविकता केहो भने पुशअप ब्रा स्त-नलाई ठूलो देखाउन मात्र लगाउने हो । यो लगाउँदैमा स्त-न बढ्ने होइन् ।
कसिलो ब्रा लगाउनेलाई सम’स्याकतिपय महिलाले साइजलाई वास्ता नगरिकन ब्रा खरिद गर्ने गर्छन् । सामान्य लाग्ने यस्तो ला’परवाहीले शरीरलाई धेरै असहज गरिरहेको हुन्छ । थाहै नपाई यही कारणले गम्भीर किसिमले गर्दन तथा ढाड दु-ख्ने हुन सक्छ । कतिपय महिला जानीजानी कसिलो ब्रा पहिरिरहेका हुन्छन् । तर, यसले गर्दा काँध, दु-ख्ने हातको पाता दु-ख्ने र गर्दनमा पनि दु-ख्ने गर्छ ।
कसिलो ब्रा लगाउँदा कस्तो स-मस्या हुन्छ ? ब्राले महिलाको स्त-नलाई छातीमै रहन सहयोग गर्छ । तर, धेरै कसिएको ब्रा लगाउँदा यसले छातीमा सहज तरिकाले रग-त सञ्चालन हुन दिँदैन ।यसले टाउकोसँग सम्बन्धित ग-म्भीर रो-ग पनि लाग्न सक्छ । लामो समयसम्म कसिएको ब्रा पहिरिँदा काधमा दाद जस्तो गहिरो दाग बन्न सक्छ । जसले गर्दा चिलाउने र पोल्ने हुन्छ ।
लामो समयसम्म लगाउँदा काँधमा निलो डाम बस्ने र त्यसबाट दादको सं-क्रमण हुन सक्छ । नमिलेको ब्रा लगाउँदा स्त-नलाई सहयोग गर्नको सट्टा गर्दनमा दुखा-इ बढ्न जान्छ र ढाडमा बढी दबाब पर्छ ।यसले टाउको र गर्दनमा जाने र-गतलाई रोकिदिन्छ । त्यसरी रोकेपछि टाउको दुख्ने स-मस्या आउँछ । कहिलेकाहीँ नमिलेको ब्रा र अन्ड-रवेयर लगाउँदा टाउको, छाती, ढाडको हड्डीमा पनि अ-सर पर्छ ।
हड्डीमा अस’र गर्दा कहिलेकाहीँ श्वासप्र-श्वासमा पनि स-मस्या हुने गरेको पाइन्छ । गल’त साइजको ब्रा लगाउँदा पेटलाई पनि खराब गर्छ । कसेर लगाइने ब्राले डायफ्रममा दबा’ब पर्छ र पाचन प्रणाली सहज नहँदा पे’टमा अ’सर गर्दछ ।कहिलेकाहीँ हात या गर्दनमा हल्का सुइले घो’चेकोजस्तो दुखाइ पनि हुनसक्छ । यो सम’स्या ग’म्भीर हुनसक्छ । यसको प्रमुख कारण गल’त तरिकाले ब्रा लगाउनु नै हो ।
रक्तसञ्चार सुचारु हुन्छब्रा–पे’न्टी कसिलो हुने भएकाले यसले र’क्तसञ्चारलाई सुचारु हुन दिँदैन, जसले दीर्घकालमा अनेक स्वास्थ्य स’मस्या निम्त्याउन सक्छ ।दाग बस्दैनब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा इलास्टिकले छालामा रातो दाग लगाउँछ । पछि यस्तो दाग कालो बन्न पुग्छ । गर्भवती अथवा स्त’नपान गराउने महिलाले भने सुत्दा खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ ।गहिरो निद्रा पर्छ
ब्रा र पे’न्टी खोलेर सुत्दा गहिरो निद्रा पर्छ । किनकि, यसरी सुत्दा शरीरले खुकुलो महसुस गर्छ । यसले गर्दा श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार दुवै सुचारु अवस्थामा रहन्छ र निद्रा पर्छ ।आराम हुन्छब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा रक्तसञ्चार र श्वासप्रश्वासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा शरीरका कोषमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन र न्युट्रिसन्स पुग्न पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर थकित हुन्छ ।स्त’नसम्बन्धी रोग लाग्दैन